Russia kuvhura mafoni uye mahwendefa ane Astra Linux munaGunyana | Linux Vakapindwa muropa
MunaGunyana, Russia inoronga kuvhura yekutanga mafoni ekutengesa mafoni uye mapiritsi ane iyo Astra Linux inoshanda sisitimu.
Izvi zvichave zvigadzirwa zvemabhizimusi, izvo zvinofanirwa kunge zviri zvekufarira, kusanganisira vezvemutemo vamiriri nemakambani makuru, nekudaro Zvirongwa zvekambani Mobile Inform Group yekuisa michina iri kutengeswa zvakaziviswa.
Izvi zvishandiso iyo iri kugadzirira kuburitswa munaGunyana, Ivo ndevekirasi yezvigadzirwa zvemabhizimusi zvakagadzirirwa kushanda munzvimbo dzakaomarara.
1 Astra Linux inogadzirira yayo vhezheni kune akachenjera madivayiri
Astra Linux inogadzirira yayo vhezheni kune akachenjera madivayiri
Tsanangudzo pamusoro pe software haisati yataurwa .
Astra Linux kuRussia Linux kugovera kune ese desktop uye server makomputa akagadziridzwa kusangana nezvinodiwa zveuto reRussia, mamwe mauto ane zvombo, uye masangano enjere.
Inopa dziviriro yedata kusvika padanho re "zvakavanzika zvepamusoro" muRussia classified ruzivo giredhi. Yakave yakasimbiswa zviri pamutemo neRussia Defense Ministry, iyo Federal Export uye technical Control Service uye iyo Federal Security Service.
Hazvisi pachena kana iyo smartphone vhezheni ichave yakavakirwa pane iyo Debian nharaunda neFly shell yakashandurwa kudiki ekubata-skrini kana pasi peiyo Astra Linux brand.
Fly inoputira ndeyekuvandudza imba inoenderana neQt fomati. Inowanikwa yeDebian yezvigadzirwa zvefoni, GNOME nharembozha uye iyo KDE Plasma nhare, yakagadzirirwa Librem 5, inogona zvakare kuchinjiswa kune iyo shanduko.
Vashandi vehurumende, vamiriri vemitemo, simba, mafuta uye gasi, kuchera, kutakura, kugadzira, nezvimwe zvakarongerwa. iva vatengi vezvinhu zvitsva. Astra Linux iri muhurukuro nevamwe vagadziri.
Ipo Rostelecom's Aurora (yaimbove Sailfish) ichinzi ndiyo yega yenyika inoshanda sisitimu, Kaspersky Lab iri kusimukira mune ino nzira.
Izvo zvishandiso zvakarongerwa kuvhura neAurora panguva ino zvinongotarisana ne "kushandira vakuru."
Sarudzo yekuchinjisa 1.4 mamirioni evatariri pakupera kwa2021 yakakurukurwa, izvo zvaizoda mari muuwandu hwemabhirioni makumi matatu nemasere.
Kunyangwe kumwe kwekukanganisa kwaAurora, nyanzvi dzakambodaidza nhamba shoma yekushandisa.
Panguva imwecheteyo, muRussia pane chinodikanwa kubva kubazi rehurumende nemakambani makuru emhinduro dzemafoni dzakazvimiririra kune matekinoroji ekunze sezvo vazhinji vakuru nevatungamiriri vachitaura kuti:
"Hazvina kuchengetedzeka uye, sezvakaratidza zviitiko zvenguva pfupi yadarika, hazvina kugadzikana nezvirango"
Nezve izvo Hardware zvinhu izvo zvakarongwa kuunzwa Mumidziyo yakangwara ine Astra Linux, zvinozivikanwa kuti kune mafoni MIG C55AL ichave ne:
Screen 5.5-inch ine resolution ye 1920 * 1080 (MIG T8AL uye MIG T10AL mahwendefa, zvichiteerana, 8 uye 10 inches)
Imwe Qualcomm SDM632 1.8 Ghz SoC processor, 8 cores
A 4000mAh bhatiri
Hupenyu hwebhatiri hwakaiswa pamaawa gumi nemaviri panopisa kusvika -20 ° C kusvika + 60 ° C uye kwemaawa mana kusvika mashanu pakudziya kwe -30 ° C.
Kudzivirirwa kirasi IP67 / IP68 inogona kumira 1.5 mita kudonha kukongiri.
Chekupedzisira, kufamba uku neRussia kuri pachena kuti inotarisira kupa gwara kune zviri kuitika nesangano reHuawei, nekuti nematambudziko amuka naTrump naHuawei.
Izvi zvakaburitsa pachena kuti akangwara chigadzirwa chinogadzirisa chine matambudziko neUS kana kunyanya nemutungamiriri wenyika weUnited States "Trump" anogona kupihwa mvumo uye kutakura mhedzisiro yese iri kuitika naHuawei.
Pamusoro pekuti chikamu chekugovera zvakanyanya kuvakuru vakuru, mauto nedzimwe nzvimbo dzakakosha kuRuisa nehurongwa hwavo zvinoonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Russia kuvhura mafoni uye mahwendefa ane Astra Linux munaGunyana
Ngwarira vim :-D